Maxaa U Diiday In Ay Midoobaan Samaroon By Abdikadir Mohamed Aqli | Cadceed newssite
Maxaa U Diiday In Ay Midoobaan Samaroon By Abdikadir Mohamed Aqli
Anigoo ka sii anba qaaday maqaalkii hor ee ahaa waa maxay midnimo yaan rabaa in aan Bulsho waynta Sheekh SAMAROON u bildhaamiyo Duufaanadii dhacay ma midayn doonaan tolka mise hakiibay kasii wadiMarkahore waxaan salaamayaa dhamaan Beel waynta Sheekh Samaroon meelkas ay dunida ka joogaan,marlabaad saxaafad gobolka oo dhan sababtoo ah iyaga la aan tood waxan oo dhami nooma hirgaleen markaas aad iyo aad ayay u mahasan yihiin DHAMAAN SAXAAFAD GOBOLKA OO DHAN.Tankale waxaan aad iyo aad uugu hanbalayaynayaa Suldaanada Sheeskh samaroon oo mideeyay dadkoodii.
Midnimadu waa xoogga ay ummaduhu ku difaacaan sharaftooda iyo karaamadooda, kagana hortagaan khataraha waaweyn ee salka ka rujin kara jiritaankooda, sidoo kale waa arrinka u sahla inay muquuniyaan cadowgooda, horumarna ka sameeyaan hirdanka siyaasadeed ee aan la hurayn. Midnimadu waa deyrka ay umaduhu iska wareejiyaan si ay isaga xaydaamaan balaayooyinka uu cadawgu la gaafwareegayo, waana dhufayska ay ka galaan dhagaraha loo maleegayo ee lala maagan yahay. Haddiise ay dhacdo in ummadaasi ku fashilanto hanaankii midnimo ee looga baahnaa waa calaamad muujinaysa in ummadaasi ayna hanan Karin jiritaan ay ku naalooto, kartina u yeelan Karin inay caga badan ku sii taagnaato.
Midnimadu waa furaha harumarka, horumarku waa bartilmaameedka ay ummaduhu ku taamayaan inay haleelaan, xoog iyo xoolana isugu geeyaan sidii ay ku gaadhi lahaayeen. Hadaba haday rabto ummadi inay ku Talaabsato isbadel muuqda oo ay ka samayso dhamaan dhinacyada ay rabto inay horumar ka gaadho, una aydo mustaqbalka dhow iyo ka fogba, kana baxdo khaanada loo yaqaan dunida saddexaad oo macnaheedu yahay (kuwa dib u dhacay kuna fashilmay inay horu kac sameeyaan), waxaa la gudboon ummmadaas sidii ay u midayn lahayd shacabkeeda iyo tamarteedaba.
Arrimaha lama dhaafanka ah ee aanay la’aantiis marnaba suuro gal ahayn inay ummadi samayso horumar ay ka midho dhaliso kuna xasisho waa midnimo iyo iskaashi dhex mara dhamaan xubnaha ay ka kooban tahay.Waxaan odhan karnaa midnimadu waa bar bilowga horumarka .
Midnimadu waa sababka ay ummaduhu ku xaqiijiyaan himilooyinkooda una maraan inay gaadhaan hankooda. Marka laga tago binu aadamka xitaa xayawaanka ayaa gartay inaanay suura gelin karin ujeedooyinkooda illaa ay cagta la helaan wadada midnimada. Haddaan tusaale u soo qaadano wakhtigii Rasuulkeeni suubanaa SCW ma is waydiisan sidee ayay ku midoobeen muslimiintu,taasoo noo suuro galisay maanta in aan heerkan soo gaadho Diinteena suuban. Hadaba Midnimo La’aan way adag tahay in ay Bulsho noolaasto Alle waxaan kabar ayayaa in uu ina mideeyo,Bulsho waynta samaroon waxaa looga baahan yahay in ay fadhiga ka kacaan oo ay midoobaan waxna isla qabtaan GACMO WADA JIR AYAY WAX KU QABTAAN
Abdikadir Mohamed Aqli